Ifektri yefoni yeselula eyenziwe ngokwezifiso iFektri, Abakhiqizi nabahlinzeki - Dongguan Changsen Electronic Technology Co., Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ishaja Power Circuit Board > Amapharamitha Weshaja Yeselula
Amapharamitha Weshaja Yeselula
Izici nokusetshenziswa kwemikhiqizo yokuphakelwa kwamandla kweshaja: I-1) Unjiniyela usebenzisa ukwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, futhi ipharamitha yokukhipha kwamandla wesifunda izinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi ekubangeleni impilo yomkhiqizo. 2) Ngokubheka ukuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezihlinzeka ngemikhiqizo efanelekayo, lenze ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, liphinde liqinisekise ukuqina kwalo. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi le-fuse lokuzenzakalelayo, ukuvikela okuzenzakalelayo okukhulu noma okufishane okuzenzakalelayo, futhi libuyisele ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha. 3) Ishaja isetshenziswa kwimikhiqizo ye-elekthronikhi neyedijithali njengamaselula.
1. Amapharamitha weshaja yeselula:
Ishaja ibhodi lesifunda lamandla
5V1A mobile phone charger voltage okokufaka 220V output voltage 5V direct chargeCharging current 1000mA
2. Izici nokusetshenziswa kwemikhiqizo yokuphakelwa kwamandla kweshaja:
1) Unjiniyela usebenzisa i ukuzinza okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, kanye nepharamitha yokukhipha yamandla we Isifunda sizinzile ngokuqhubekayo ukuvimbela ukwehla kwamandla kagesi ekubangeleni ukulimala empilweni yomkhiqizo.
2) Uma ucabanga ngokuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga izinto ezifanelekile zokunikezwa komkhiqizo, lenze ukuguga nokuhlolwa amahora angama-720 ngaphandle kokuphazamiseka, futhi ukuqinisekise kaninginingi ukuthi ukuqina. Ibhodi lesifunda lizofakelwa ibhokisi le-fuse elizenzakalelayo, i-high-voltage noma i-short-circuit protection ezenzakalelayo, bese ibuyisela ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha.
3) Ishaja isetshenziswa kwimikhiqizo ye-elekthronikhi neyedijithali njengamaselula.
3. Ishaja Imininingwane:
imikhiqizo ye-ood, indida
Iwaranti yeminyaka emibili enezinxephezelo ezinhlanu ngenkinga yethu
Uhlelo lwebhodi lesifunda
Uhlelo lokusebenza lwe-IC kuqinisekisa amandla nokuvikelwa okwanele
Ngaphezulu kwamanje, layisha ngokweqile, ukuvota ngokweqile nokuvikelwa kwesifunda okufushane
I-elekthronikhi entsha izingxenye
Ukuguga noma cha
I-oda elilodwa, nokusekelwa ukuhlola
Ukulethwa ngaphakathi Izinsuku ezingama-25
Inqubo yamahhala yokuhola
1ï¼ ‰ Ishaja inayo uphase isitifiketi sikazwelonke sobuchwepheshe, i-3C, isitifiketi se-CQC
2ï¼, Sizoklama imishini yokuhlola ekhethekile ngayinye imikhiqizo yethu. Yonke imikhiqizo isivivinyo sesipiliyoni. Hhayi ukuhlolwa okungahleliwe omunye wemishini yokuhlola umkhiqizo:
Ibhodi lesifunda ligcwele i ibhokisi elenziwe ngokwezifiso, i-anti-collision ne-shockproof, kanye ne-PE bag-proof umswakama ukupakisha.
1) Amashaja ajwayelekile angafakwa futhi athunyelwe ngosuku olufanayo.
2) Ishaja izoba iyatholakala ngamasampuli kungakapheli izinsuku eziyi-7.
3ï¼, Pricesare ileli ngokuya ngobuningi bebhodi lesifunda eliphrintiwe.
4ï¼, ngokwezifiso imiyalo:
Inqobo nje uma usitshela i izidingo zokusebenza, onjiniyela bethu bazokunikeza ngomklamo, izixazululo zokuthuthukisa nokukhiqiza. Singakwazi ukuklama kunoma yisiphi isimo nosayizi. Senze amashumi ezinkulungwane ngokwezifiso, futhi siyakwazi ukuklama futhi khiqiza izinto ze-elekthronikhi ezidinga ubuchwepheshe nobungaguquguquki. Okwethu ukukhiqizwa kuyizintambo zokukhiqiza ezizenzakalelayo ngokuphelele, zingakunikeza ngokuzinza ikhwalithi nokusebenza okungaguquguquki kwemikhiqizo. Ukusungula isikhathi eside ubudlelwano bokusebenzisana, obulungele ukugcina ukuzinza kwe ikhwalithi yomkhiqizo nezinsizakalo zobuchwepheshe ezilandelwayo Inkampani yethu isebenza kakhulu ngokwezifiso, kepha azikho ezenziwe ngomumo. Izithombe ezilapha ku I-inthanethi wonke amasampula esiwa-odile ukukhiqizwa kwamakhasimende.
1ï¼, Paymentmethod: 30% yokukhokha kusengaphambili, ibhalansi ekhokhelwe ngemuva kokuthunyelwa.
2ï¼, Shipimmediately uma ubukhulu indawo ihlangabezana nezidingo.
3ï¼ ‰ Uma awazi umkhiqizo, sicela uye egumbini lethu lokubonisa ukuze ubone isampula, qinisekisa futhi u-ode, ikhwalithi ilungile uku-oda, ukulethwa uma kukhona umehluko phakathi komkhiqizo nesampula kungasekela ukubuya nokushintshaniswa, ikhwalithi isuselwa kusampula!
8.Introductionto services board board:
Umhlangano wangaphambi kokudayiswa uzoxhumana ngenkuthalo namakhasimende ngemininingwane eningiliziwe, izidingo zamakhasimende, imingcele yemikhiqizo, amazinga wekhwalithi, ukuhlinzeka ngokubonisana, ukwamukela ama-oda ocingo kanye nama-mailorder, futhi inikeze ngezinsizakalo ezahlukahlukene ezilula nezimali.
Nikeza amakhasimende isisombululo esihle kakhulu se- isilinganiso sokusebenza kwentengo kokuthengisa, ukulandelela ngenkuthalo ukusayina inkontileka, izimpahla ukulethwa nokusiza amakhasimende ukuxazulula ubunzima.
Ngemuva kokuthengiswa: 1. Ifit yinkinga yekhwalithi yomkhiqizo uqobo, iholela ekunganeliseki.Sizosiza ikhasimende ukuxazulula inkinga ngokushesha okukhulu ngesikhathi esivunyelwe. 2. Uma umkhiqizo ungeke usetshenziswe ngokujwayelekile ngenxa yezici zomuntu.Sichaza ikhasimende imbangela yenkinga, okukhombisa ukuthi le nkinga ayimboziwe ngewaranti yethu, bese sinikeza ezinye izixazululo kumthengi ngokwenkinga yekhasimende.
Amathegi ashisayo: Amapharamitha Weshaja Yeselula, Kwenziwe ngentando, Kwifekthri, Abenzi Nabahlinzeki